“Man City uma imaan inaan ku guuleysto Champions League.”.- Pep Guardiola – Gool FM
“Man City uma imaan inaan ku guuleysto Champions League.”.- Pep Guardiola
Byare April 17, 2019
(Europe) 17 Abriil 2019. Macalinka Manchester City Pep Guardiola oo hadlay ka hor kulanka caawa ay lugta labaad ee wareega sideed dhammaadka Champions League ku wajahayaan naadiga Tottenham ayaa sheegay inuusan Etihad Stadium u imaan inuu ku guuleysto Champions League balse uu u yimid hadaf intaas ka wayn.
Macalinka reer Spain ayaa caddeeyay in Champions League uusan ahayn hadafka ugu waynaa markii uu saxiixayay heshiiska kooxda reer England balse uu ahaa inay kooxdu ciyaarto kubbad soo jiidasho leh taa oo uu ka miro dhaliyay tan iyo sidii uu ugu soo biiray.
“Halkaan uma imaan inaan ku guuleysto Champions League, balse waxaan halkaan u imid inaan kooxda ka dhigo inay u ciyaarto sida ay u ciyaartay labaatankii bilood ee la soo dhaafay,” 48-jirka ayaa sidaa ka yiri shirka jaraa’id.
“Waan ka helaa tartamada ku guuleysiga Champions League waa baahideyda, balse kubbada cagta waxaad guul darreysaneysaa in ka badan inta aad guuleysato waxaan isku dayayaa inaan bixiyo teyda ugu fiican.”.
Manchester City oo lugtii hore guul darro 1-0 kala soo kulantay Spurs ayaa caawa ku marti qaadeysa Etihad Stadim iyadoona looga fadhiyo gool iyo wixii ka badan si ay ugu soo gudubto wareega sideed dhammaadka tartanka.
"Way naga cabsadeen Juventus.".-
Sadio Mane oo ka dhawaajiyay war aad uga farxiyay taageerayaasha Liverpool